गायिका कल्पना दाहाललाई फेरी अर्को ठुलो ब’ज्रपात ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारगायिका कल्पना दाहाललाई फेरी अर्को ठुलो ब’ज्रपात !
काठमाडौं– गायिका कल्पना दाहाललाई फेरी अर्को पि’डा थपिएको छ। उनि दु’खबाट बल्ल केहि थि’रिएको थिईन तर केहि समय बि’त्न नपाउदै फेरी अर्को ब’ज्रपात भएको छ। उनकी आमा फेरी अस्पतालको बेडमा जीवनको ल’डाई ल’डिरहेकी छिन।
लामो समय देखिको बि’रामी उनि फेरी बि’रामी भए पछि कल्पनालाई थप पि’डा थपिएको हो। पछिल्लो केही महिनायता सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित बनेको जोडी हो गायिका कल्पना दाहाल र प्रखर वक्ता रमेश प्रसाईंको । विशेषगरी टेलिभिजन कार्यक्रम इन्द्रेणीमा यो जोडीले दोहोरी गाइसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक रुचाइयो ।
रमेश प्रसाईं दृ’ष्टिविहीन हुनहुुन्छ । उहाँको बोल्ने शैली, ज्ञानलाई निकै रु’चाइएको छ । पछिल्लो समय दोहोरी गाउन सक्ने कलाले झन् उहाँलाई थप चर्चामा ल्याइदियो । यतिकैमा अहिलेको साता यो जोडीको चर्चा झन् शिखर पुग्यो । गत मंसिर २२ गते रमेशले नन्दा सिंहसँगको तीन वर्षदेखिको प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्नुभयो ।